Home Wararka Gudaha Mareykanka oo war kasoo saaray casuumad la sheegay in Biden u fidiyey...
Mareykanka oo war kasoo saaray casuumad la sheegay in Biden u fidiyey Xasan Sheekh
Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ka jawaabtay warar labadii maalmood ee u dambeeyey qabsaday baraha bulshada oo sheegayey in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu casuumad rasmi ah usoo diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh maxamuud.
Safaaradda ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigay twitter-ka ku sheegtay inay caddeyneyso in waqtigan la joogo aysan jirin casuumad rasmi ah oo ka timid madaxweynaha Mareykanka oo loo soo diray madaxweynaha Soomaaliya si uu u booqdo Washington DC.
Safaaradda ayaa intaas ku dartay in dowladda Mareykanka ay ka war hayso in madaxweynaha Soomaaliya uu hadda aad ugu mashquulsan yahay dhismahada dowladdiisa cusub.
Madaxweyne Xasan oo la doortay 15-kii May ayaa waday kulamo siyaasadeed iyo la-tashiyo la xiriira magacaabista ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, welina xilka kalama wareegin madaxweyne Farmaajo oo illaa hadda ku sugan madaxtooyada.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 17-kii bishan May soo dhoweeyey go’aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go’aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidanka Soomaaliya.
Fariin lagu qoray barta twitterka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay Maraykanka u aragto waddan iskaashi la isku hallayn karo la leh Soomaaliya, marka ay noqoto baadi-goobka Soomaaliya ugu jirto xasillooni iyo dhinaca la-dagaalanka argagixisada.
Previous articleDaawo: CC Shakuur: Xasan Sheekh qabiil laguma taageerin balse waxaa jiray…
Next articleSheekh Aadan Madoobe oo loo gudbiyey dalab la xiriira lacagihii musharaxiinta
Siyaasi ka tirsan xisbiga dowladda Kenya oo Soomaalida ka raalligeliyay arrin...
Xukuumadda Somaliland ayaa ka biyo diiday tirada sannadka laga siiyay dadka...
Baarlamaanka Maraykanka oo ansixiyey in Ukraine lagu caawiyo $40 Bilyan